PAROASY MARIA MANJAKA 67 Ha - Lakroan'i Madagasikara on line - Les actualités sociales et religieuses à Madagascar
PAROASY MARIA MANJAKA 67 Ha
Rojo RANDRIANARIMALALA il y a 5 années
« Sambatra ianao e, nino ny Tompo, nataony avokoa izay voalazany anao. » lioka 1, 45. Teny faneva nentin’ny fiangonana nitaomana ny kristianina hiaina bebe kokoa eo anivn’ny finoana. iray amin'ireo lahatsoratra finoana hitanao ao amin'ny Lakroa 2 febroary 2014. Marihina fa io laharana dia ahitanao ny dian'ny mpivahiny tany Antsiranana nametraka ny Ariseveka vaovao.
Nipoitra avy tao amin’ny Aumônerie catholique Universitaire 67ha ny Paroasy Maria Manjaka. Tsy trano fiangonana avy hatrany anefa no nijoro tamin’izany. Nandefa pretra ny fikambanan’i Jesoa (zezoita) ary tany an-tokantranon’ny kristianina no natao ny lamesa. Ny taona 1996 vao nahazo ampahan-toerana tao amin’ny Sambo (trano nipetrahan’ireo mpianatry ny oniversite) ny kristianina. Vokatry ny fikarakarana nataon- dRazafindrarangy Vincent, mpiasan’ny presidansa tamin’ny fotoan’andro izany. Tsy maintsy nohavaozina isan-taona anefa ny fangatahana hampiasa ny trano ary nisy fotoana notapahan’ny Oniversite ny fahafahan’ny Fiangonana hampiasa io trano io. Nofantsihana ny varavarana ary tsy afaka nivavaka tao intsony ny kristianina. Voahidy tao ihany koa ny sary vongan’i Masina Maria. Saingy noho ny fiaraha-miasan’ny ministry ny mponina sy ny fampianarana ambony dia nivoaka ny baiko hamohana indray ny trano fiangonana. Tsy nikatona intsony izany nanomboka teo fa nohakelezina fotsiny ny toerana nisy azy. Azo soa aman-tsara ny trano sambo sy ny tanin’ny SEIMAD. Nafindra teny Ankatso kosa ireo mpianatra teny amin’ny 67ha. Ny 10 May 1998, namangy ny Fiangonana ny kardinaly Armand Gaëtan RAZAFINDRATANDRA. Nambarany tamin’ny fomba ofisialy tamin’izany fa paroasy ny Fiangonana Maria Manjaka.
Jobily faha 15 taona
Mankalaza ny faha 15 taonany ny paroasy amin’izao. Nosokafana ny volana May 2013 lasa teo izany ary ho faranana ny 10 May 2014 izao. Maro ny hetsika nentina nankalaza izany. Isan’izany ny ivon’ny fankalazana notanterahina tamin’ny fetim-piangonana ny Septambra lasa teo. Ary nitohy tamin’ny fitsangantsanganana natao ny Alahady 26 janoary 2014 teny Andempona Alasora, tao amin’ny sekoly Masindahy Gerard Magella. Nahatratra 2800 tamin’ireo kristianina 3300 no tonga nanatrika io fotoana io ary omby dimy no novonoina ho nofon-kena mitam-pihavanana. Maro ny ezaka efa vita nandritra izay 15 taona izay. Isan’izany ny trano ho an’ny pretra raha tany Isotry no nipetrahany teo aloha. Nofefena tamboho ihany koa ny manodidina ny trano fiangonana. Teo koa ny tilikambo miaraka amin’ny lakolosy elektronika. Manana fitaovana fanamafisam-peo ampy hanatsarana ny fotoam-pivavahana ny paroasy. Vokatry ny ezaka nataon’ny kristianina tanteraka ireo rehetra ireo.
Ireo hery velona misy:
Manana fikambanana masina miisa valo ny paroasy. Ny Ekipan’ny Raozery, ny Garde d’Honneur, ny Lahika Fransiskanina, ny Antily, ny Fanilo, ny Fivondronana Eokaristikan’ Tanora (FET), ny Mpiray Dinidinika Miaraka amin’i Kristy (MDMK), ary ny Fivondronan’ny Tokantrano Kristianina (FTK). Ahitana vaomieran’asa valo ihany koa. Isan’izany ny FIofanana FAnambadiana KRIstianina (FIFAKRI), ny VAOmieran’ny FIantsoan’ Andriamanitra VAOFAFIA, ny VAomieran’ny LItorjia (VALI), ny Vaomiera Sosialy sy Fampandrosoana (VSF), ny antoko mpihira zokiny sy zandriny, ny mpiservy ary ny JUSTICE ET PAIX. Faritra dimy no mandrafitra ny paroasy: Andrefana I sy II, Avaratra, Atsinanana ary Atsimo.
Ireo pretra nifandimby:
I Mgr RAJAONA Anselme no Curé voalohany nitondra tao amin’ny paroasy rehefa tsy nosahanin’ny pretra aomonie oniversitera intsony. Nandimby azy ny pretra RAHETINJATOVO Gérard. Avy eo i mompera RAKOTONDRABE Richard Antoine izay nitantana nandritra ny sivy taona. Nodimbiasin’i mompera Guy Arthur RANDRIANANTOANINA. Ny taona 2009 ka hatramin’izao dia i mompera RANDRIANARIMALALA Angelico no cure nitantana ny paroasy. Manampy azy ao amin’izao i mompera RAMAROSON Georges Patrice, vicaire permanent sy RAFIDISON Abdon, vicaire dominical.